2022 AGD Launches an App inaBid for Digital Transformation
Home Business AGD Launches an App inaBid for Digital Transformation
Asia Green Development Bank – AGD has launched an application called AGD Go on June3inabid to transform its services to digital aiming to reduce crowd in its branches.
The new app will enable users to deposit or withdraw cash into and from the account and check the balance, notice, and report.
“The AGD Go will be more useful for our customers since they don’t need to come to the bank for banking services. Instead, they can use the service on the phone,” U Pyi Soe Htin, Chief Business Officer of AGD Bank, said.
When withdrawing or transferring money, the bank will send an OTP password to the user’s registered phone number after he or she has filled the required information in the app on his or her phone. This will avoid all other procedures such as filling forms and reduce customer’s time spent to receive the service.
“By using this app, we can reduce paperwork and cut the long line of waiting,” he added.
Asia Green Development Bank Limited (AGD Bank), launched in Naypyidaw in August 2010, has opened 77 branches in the country.
AGD ဘဏ်ခွဲများအားလုံးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀န်ဆောင်မှုသို့ အသွင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်နှင့် ဘဏ်အတွင်း၌ လူစုလူ ဝေး ဖြစ်ပွားခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ဘဏ်၀န်ဆောင်မှု အသစ်ဖြစ်သည့် “AGD Go “အက်ပလီကေးရှင်းကို ဇွန်လ ၃ရက်နေ့တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Application အသစ်တွင် ငွေသားထည့်သွင်းခြင်း၊ ငွေသားထုတ်ယူခြင်း၊ ငွေလက်ကျန် စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အသေးစား ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အစီရင်ခံစာများကို ကြည့်ရှုခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ AGD Go အက်ပလီကေးရှင်းဟာ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်စေလိမ့်မယ်၊ အများကြီးပိုမိုထိရောက်မှုရှိမယ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘဏ်ကိုလာပြီး ၀န်ဆောင်မှု ရယူတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်း သက်သာစေမှာပါ” ဟု AGD ဘဏ်၏ Chief Business Officer ဖြစ်သူ ဦးပြည်စိုးထင်က ပြေသည်။
“AGD GO” Application ကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက Customer ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ဖုန်းထဲသို့ တစ်ခါသုံး Password (OTP) ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ယင်း Password ကို ထည့်သွင်း၍ ငွေလွှဲ၊ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သားတွေအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံး ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အခုအက်ပလီကေးရှင်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ ဒီ အက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုမည်ဆိုပါက ဘဏ်တွေမှာ စာရွက် အသုံးပြုမှုကို လျော့ချနိုင်မယ့်အပြင် လူတန်းအရှည်ကြီး စောင့်းဆိုင်းနေရတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း လျော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောသည်။
Asia Green Development Bank Limited (AGD Bank) သည် နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၇၇ကို မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိသည်။
Previous articleGeely’s Volvo Cars sales soar 40% in May vs month-ago as virus curbs ease
Next articleGovt’s Stimulus Package Benefit 1,000 Enterprises in3Months